HGH uye Cancer - Chokwadi uye Nhema?
1. HGH uye Cancer - Chokwadi uye Nhema?
2. Kudzorera mabasa eHGH mumuviri
3. HGH kurapwa - kubva kudiki kunopisa
4. Kuwedzera kwevanhu hormone kukurudzira kenza here?
5. Ko HGH inogona kurova mutsaini here?
6. Chiitiko chinogumbura cheHGH pakukudziridzwa kwevecology kana kuti nhema dzinobva kupi?
7. HGH Thailand - chibereko chinobudirira kubva kumutengesi akavimbika.
Kudzikisa pasi nekukwegura, kubvisa kuwedzera kwakanyanya, kuwedzera kukura kwemasimba mashoma ndezvishoma zvezvikonzero nei zviuru zvevanhu zvichida kutenga kukura hormone, inozivikanwawo se HGH uye Genotropin.
Asi avo vanonyanya kukosha nezvehutano hwavo uye vasina kujaira kutora chivimbo chiziviso, vachiri kukanganisa: ichi chigadzirwa chinotyisa here? Mushure mezvose, nhasi kuve nokushingaira kuve nokunyanyisa ruzivo rwaanoti unogona kukonzera kenza. Zvisinei, zvidzidzo zvenguva pfupi zvakatsigira: kukura hormone kwete chete hakumutsvaki kukura kwechirwere, asi mune dzimwe nguva, asi, pane kukwanisa, kuikwanisa.
Kudzorera mabasa eHGH mumuviri
Kushandiswa kwekutanga kushandiswa kweHummoni kukura hormone kwaibatanidza nechinangwa chayo chinangwa uye zita. Mune 1964, muAmerica Baltimore, mushandirapamwe mukuru wakatangwa nokuda kwekusununguka kwevanhu vashoma - vanhu vanotambura nokushaya HGH mumuviri. Nenguva isipi vatengi vakagwinya vakavawo nehanya nemushonga uyu: vakawanda vakazviwanira vana vavo kuitira kuti vaite vakakwirira uye nokudaro vape mitambo yemitambo.
Zvadaro, kuburikidza nokutsvakurudza, masayendisiti akawana kuti kuwedzera kukura hakusi kukwanisa chete kwehomoni. Chibereko chacho chakatanga kuwana mukurumbira pakati pevatambi nekuda kwevanabolic yake. HGH inokurudzira mapuroteni synthesis uye kupindira kweamino acids mumisungo, nemhaka yekuti vanowedzera pavanowedzera muviri.
Zvisinei, anabolism inokosha kwete kungoita zvinyorwa, asiwo kubata kurapwa, iyo inowanzogara kune vatambi uye vemuviri. Yakaratidza kuti kukura kwehomoni kunokurudzira kupora nokukurumidza:
- Bones. Maererano nekucherechedza kwevanakiriniki, pavanotora Genotropin, zvinyorwa zve calcium mumuviri zvinowedzera kuwedzera uye zvino zvishoma nezvishoma. Izvi zvinoratidza kusimbiswa kwemapfupa emapfupa ekare uye kuumbwa kweimwe itsva.
- Mishonga yakadzika, kusanganisira musuru. Kubudirira kugadzirisa kunokonzerwa nekuwedzera kweproteni yekare pasi pesimba reHummoni kukura hormone.
- Cartilage. Izvo zvakashata zvakanyanyobatanidzwa zve musculoskeletal system. Kunyanya kunetseka kukuvara uye kusakwanisa kudzokera zvizere ivo pachavo, sezvo chimiro chavo chiri 97% yakaumbwa nezvinhu zvinowanikwa kune extracellular. Panguva imwecheteyo, kusiyana nemapfupa, ivo vanonyanya kunyanya kuziva nezvekusarudzwa kwekugadzirisa: vanoita chete kuHGH. Kunzwisiswa kwemasero kusvika pakukura kwehomoni ndeyei 100 nguva dzakakwirira kudarika anabolic steroid, insulini uye adaptogens.
Izvi zvinoratidza kuti kutanga kwekushandiswa kwakakura kwekurasira hormone mukurapa kwezviputi, zvinomera uye zvimwe kukuvadzwa kwemishuloskeletal system, kwete chete mumitambo.
Mushonga uyu wakaratidza mitsara yakaisvonaka, kusanganisira nekukuvara kwakawirirana pamwe chete, apo zvikamu zvose zvemafupa zvakagadzikana: mapfupa, ligaments, musumbu. Maererano navanachiremba, pavanenge vachishandisa HGH, kuporesa kwekukuvara kwakasiyana-siyana kwemupaka, majoka makuru uye maduku anenge kaviri nekukurumidza.
Zvakakosha kuwedzera kuti munyaya yezvinyorwa zvejereti Genotropin haigoni kupa mushonga unoshanda, asiwo inoshanda seprophylactic agent. Nokuita pane zvinhu zvakasiyana-siyana, chigadzirwa chinosimbisa hutakiti, nekudzivirira kukanganisa kwe intervertebral discs uye menisci.
HGH kurapwa - kubva pakuderera kunopisa
Kuwanikwa kweHGH kukwanisa kubvisa pituitary nanism, kureva kuti, kurara, kwaivawo kutanga kwekusakisa kwekuti vana vasati vasvika vanowanzotambudzika. Chokutanga pane zvose, ndezvekushaikwa kwehurefu nekurema. Mukuwedzera, kuwedzera kweHummone yevanhu inobata kukura kwepabonde, kuumbwa kweuchenjeri, chiyeuchidzo uye kukwirira kwepfungwa.
Nokudaro, nehutano hwakakodzera mumwana, vanachiremba vanofanira kutarisa huwandu hweHGH uye, kana zvichidiwa, varayirire mishonga.
Pamusana pemafuta ayo anebolic yakakura, kukura kwehomoni kunoshandiswa mazuva ano munzvimbo dzakawanda dzemishonga uye kunobatsira kubatsira varwere vane zvirwere zvakasiyana-siyana:
- Burn sickness. Chironda chakazaruka chakazara nekurasikirwa kukuru kweprotini, inogona kuuraya. HGH inokurudzira mapuroteni synthesis, kubatsira maitiro ekugadzirisa.
- Zvironda zvepamu uye ura. Apo kushandiswa kwechirwere kunomira kubuda ropa uye kunowedzera kuporesa.
- Heart failure. Kukura kwevanhu hormone kunogona kukurudzira kukura kwemisha yemasero masero mushure mekurwa.
Zvirwere zvemazino izvo zvisingagoni kunyoreswa kurapwa nemaitiro anowanzogadzirwa nemishonga. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, periodontal chirwere.
Urongwa urwu hunogona kupfuurirwa nehutachiona hwepascreas, chiropa, itsvo, meso, nezvimwe zvirwere, zvinoda kukurudzirwa kwehutano hunobudirira hwekurapa. Mukuwedzera, chigadzirwa chacho chinobatsira zvakakwana pamuviri:
- inovandudza hutano hweropa;
- kusimbisa masimba emuviri;
- kunowedzera kusawirirana mupfungwa;
- kuunganidza simba remhepo;
- inodzivirira kuitika kwe microtraumas;
- inobatsira kudzoka nokukurumidza mushure mekuita zvekuita.
Vose masayendisiti nevashandi vanogutsikana kuti kukura hormone kune mikana yakawanda iyo inobatsira kukurira zvirwere zvakawanda. Nokudaro, rutivi rwekushandiswa kwayo rucharamba rwuchiwedzera.
Kuwedzera kwevanhu hormone kukurudzira kenza here?
Pamwe pamwe nezvinobatsira zvakananga zveHGH paInternet, kukwanisa kwehomoni kunonzi inokonzera kenza inowanzotaurwa. Tinofanira kubhadhara mutero kuvanyori: vari kuedza kuva vavariro. Nokudaro, nharo inotevera inowanzopiwa sechikamu chetsika yake: kana masero ane utano ari kukura zvakanyanya apo mishonga inotorwa, zvinoreva kuti masero emukenza anowedzerawo. Zvingaita sezvinonzwisisika, asi chaizvoizvo zvinhu zvose zvakaoma zvikuru.
Kutanga iwe unofanira kufungisisa kuti HGH yakanga isati yamboedzwa nevanorwara nekenza nekuda kwekufungisisa. Saka, kliniki ye data inogona kusimbisa kuti kukura kwehomoni kunowedzera kukura kwemasero akaipa, kwete. Asi pane mhedziso yevanotsvakurudza vanobva pakudzidza maitiro ehutano kune kenza.
Vanhu vane ngozi iyi inowanzove yakabudirira mune zvemitambo, kunyanya iyo inobatanidza nekuvaka musimba. Muviri wavo une zvinhu zve 2. Kutanga, mapuroteni synthesis anonyanya kukurumidza. Asi zvipuka zvinokura pamwero wakakurumidza. Chechipiri, mafuta anopa oxidize zviri nani. Nokudaro, simba rekugona rakakwirira kupfuura iro revamwe.
Kunyange zvakadaro, kana tumarara dzichioneka (iyo isiri iyo yakatemerwa kare), zvirwere zvemuviri zvingakundikana: masero ayo haasati aziva uye kuparadza maooplasms. Izvi zvinowanzoitika kumativi ose e40, apo thymus kana thymus gland, iyo inokonzerwa nekudzivirira chirwere chekenza, inotanga kuitika. Mukusavapo kwekudzivirirwa, chirwere ichi chinowedzera.
Mubvunzo unomuka: Ko kukura kwehomoni kunogona kushandiswa nevanhu vane maitiro ekugadzirisa maitiro kune oncology? Masayendisiti anopa mhinduro yakajeka: pazera remakore e30, kushandiswa kweHGH kwete chete hakuiti kukuvadza, asi kunyange zvikomborero.
Ichokwadi ndechokuti kuwedzera kweHommone yevanhu ndiyo chete inogadzirisa kubudiswa kwemasero ezvirwere zvekuzvidzivirira.
Chokutanga pane zvose - thymus. Kunyanya kushanda simba rekukura kwehomoni, iyo huru iyo thymus gland ichasvika. Nokudaro, ichakwanisa kudzivirira muviri kubva kune masero anouraya kwenguva refu. Sayenzi haisati yawana chero nzira ipi zvayo yekuwedzera kwakanyanya mumusmusmus.
Mamiriro ezvinhu akasiyana zvakasiyana nevanhu vakwegura kupfuura makore e40. Mukuvapo kwekugara nhaka, zvinogoneka kuti zvirongwa zvepanyama mumutumbi zvave zvatotanga, asi zvisingazvizivikanise. Saka, usati watora mishonga iyi, zvinokurudzirwa kuti uwane kuongororwa kwakakwana kwechiremba.
Kana vari vatengi vasina mhuri inotarisirwa kuti vawane chirwere, vanogona kushandisa kukura kwehomoni pamusana pokungwarira kwavo zvachose panguva ipi zvayo. Kwavari, chigadzirwa chacho chakachengeteka zvakakwana.
Oncologists vanobvuma kuti havanzwisisi kurwiswa kweHGH: anabolic steroid uye androgens inotyisa zvikuru kune vanhu vane dambudziko rinowanikwa. Izvozvo zvinokonzera kukurumidza kuputika kwetmusmus - mune dzimwe nguva, muviri unorasikirwa nhengo inodzivirira kwevhiki dzinoverengeka. Anabolic steroids haiti kuita zvakakurumidza kudaro, asi inotungamirira kune imwe yerugwaro.
Ko HGH inogona kurova mutsaini here?
Inenge ichangotanga kutaura pamusoro peizvi zvisingafungi, asi zvinogona kuti iyo hormone iyo ikozvino yafungidzirwa kuti inobatanidzwa mukukudziridzwa kwevecology ichakurumidza kuva mushonga unobudirira. Uchapupu hweizvi-chidzidzo chakaitwa munaNovember 2018 paYunivhesiti yeMiami.
Masayendisiti akagadzira mishonga MR409, inobva pakukura kwevanhu hormone. Vakabva vadzidza kuti zvinhu zvitsva zvinoshanda sei maererano nekenza masero panguva yekuedza mudyari yaPetri uye pamakumbo mhenyu ayo aimbova mamarara emunhu:
Mune mudziyo we laboratori, sezvazvaifanira kunge, MR409 zvakakonzera kukura kwemaruva akaipa. Uye zvinokanganisa mhuka, kushamisika kwevatsvakurudzi, zvakapa chigumisiro neicho chaicho chakasiyana. Kukura kwekenza kwakamira.
Zvinopera, MR409 haishande seanorogue HGH, asi sechikamu chakakwana. Masayendisiti akaisa chikonzero che "chiito" ichi. Izvo zvakawanikwa kuti chidimbu chinopinda muukama nekurasima hormone receptors mumatumbu uye mumutambo wepituitary, uchidzivhara. Izvi zvinogoneka chete kune vanhu vari kurarama, uye kwete mumamiriro ezvinhu ari oga.
Izvozvo zvinoita kuti chiedza chekuedza chive nematumbu mumunhu. Vatsvakurudzi vari kutoronga kutanga kutanga mishonga yemukenza mutsva inobva kuM MR409.
Chiitiko chinogumbura cheHGH pakukudziridzwa kwevecology kana kuti nhema dzinobva kupi?
Mashoko ose, kusanganisira nhema, ane mavambo. Kuti anzwisise chii chakaita kuti vanyori veIndaneti vawedzere kukura kwehomoni nekutanga kwekenza, zvinokwana kugadzirisa mishonga yakagadzirwa neChinese iyo iri kutengeswa zvakasimba muRussia nhasi.
Isu tiri kutaura nezvemafuro asina kuvimbiswa ayo asina chokuita neHin growth hormone. Pasi pekugadzirisa kwechigadzirwa ichi kushandisa peptides, iyo, maererano nenyanzvi, inokonzera kukura kwezvirwere zvinotyisa kune vanhu vane maitiro ekugara nhaka.
Uye kunyange pakati pevaduku, vasingatauri avo vanopfuura 40. Saka, usati watenga Genotropin, nyatsoteerera kune akagadzira uye kuwanikwa kwechigwaro.
HGH Thailand - chibereko chinobudirira kubva kumutengesi akavimbika
Pamusika wemazuva ano, kwete chiChinese chete, asiwo zveEurope uye zvekunyika zvinowanikwa mune zvakawanda. Vamwe vavo vane unhu hwakanaka uye zvinyorwa zvinodiwa. Imwe yacho ndeyemhuka yakashata uye inoshandiswa inenge "kubva pasi pasi". Kana iwe uchida kutenga mutemo wevanhu wepamutemo wekukura uye panguva imwe chete uwane mhinduro inofanirwa kubva pakushandiswa kwayo pasina michero, taura nevatengesi vakavimbiswa.
HGH Thailand ndiyo inonyanya kugovera yeHGH michina muThailand. Iyo kambani inopa zvinodhaka kunyika dzose dzepasi, kusanganisira Thailand. Kutaura nesu, unowana huwandu hunobatsira:
- Proven quality. HGH inotengeswa paIndaneti ine mabhizimisi ose uye zviiti.
- Mutengo wakakwana wezvinhu. HGH inowanikwa kune mutengi nemari ipi zvayo.
- Kunaka kwekutenga. Iwe unogona kuita chikumbiro kubva kunzvimbo ipi neipi mumaminitsi.
Ita kuti zvive nyore: kuzadza fomu yepaIndaneti, tarisira kudanwa komutungamiriri, tsanangura rudzi rwechigadzirwa chaunoda, ivhu rezvigadzirwa uye nzvimbo yaunoda kuigamuchira.
Nguva yakatarwa yekuendesa kwezvinhu kubva kuThailand ndeyezuva re4-7. Kana iwe uchida kutanga kushandisa mushonga nokukurumidza sezvinobvira, zvino nokuda kwekuwedzera mari iwe uchauunza mumazuva 1-3. Nguva chaiyo inobva pane nharaunda yako.